Marko 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Marko Asɛmpa 15:1-47
Wɔde Yesu kogyinaa Pilato anim (1-15)
Wodii Yesu ho agoru wɔ baguam (16-20)
Wɔbɔɔ no asɛndua mu wɔ Golgota (21-32)
Yesu wui (33-41)
Wosiee Yesu (42-47)
15 Na ahemanakye no ara, asɔfo mpanyin ne mpanyimfo ne akyerɛwfo no, kyerɛ sɛ, Sanhedrin no nyinaa, hyia faa adwene, na wɔkyekyeree Yesu nsa de no kɔe, na wɔde no kɔmaa Pilato.+ 2 Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Wone Yudafo Hene no anaa?”+ Na obuaa no sɛ: “Wo ara na woreka.”+ 3 Na asɔfo mpanyin no kekaa nsɛm bebree guu no so. 4 Afei Pilato fii ase bisabisaa no nsɛm bio sɛ: “Wunni anoyi biara a wode bɛma?+ Hwɛ sɛnea wɔreka nsɛm bebree gu wo so.”+ 5 Nanso Yesu amma no mmuae biara bio, na ɛyɛɛ Pilato nwonwa.+ 6 Nea ɛte ne sɛ, edu afahyɛ biara a, na ogyaa nnipa a wogu afiase no baako ma wɔn; nea nkurɔfo no bɛka sɛ onnyaa no no, na wagyaa no.+ 7 Saa bere no, na obi a wɔfrɛ no Baraba ne nnipa bi a wɔasɔre atia aban gu afiase. Ná saa atuatewfo no nam wɔn atuatew no so adi awu. 8 Enti nnipadɔm no foro bae, na wofii ase srɛɛ Pilato sɛ ɔnyɛ nea ɔtaa yɛ ma wɔn no. 9 Pilato bisaa wɔn sɛ: “Mopɛ sɛ migyaa Yudafo Hene no ma mo anaa?”+ 10 Ná Pilato nim sɛ ahoɔyaw nti na asɔfo mpanyin no de no abrɛ no.+ 11 Nanso asɔfo mpanyin no tutu guu nnipadɔm no asom sɛ wɔmma onyi Baraba mmom mma wɔn.+ 12 Na Pilato san bisaa wɔn sɛ: “Ɛnde dɛn na menyɛ nea mofrɛ no Yudafo Hene no?”+ 13 Na wɔsan teɛteɛɛm sɛ: “Bɔ no asɛndua mu!”*+ 14 Na Pilato toaa so bisaa wɔn sɛ: “Adɛn? Bɔne bɛn na wayɛ?” Nanso wɔkɔɔ so teɛteɛɛm denneennen sɛ: “Bɔ no asɛndua mu!”*+ 15 Esiane sɛ na Pilato pɛ sɛ ɔsɔ nnipadɔm no ani nti, ogyaa Baraba maa wɔn; afei ɔma wɔhwee Yesu,+ na ɔde no maa wɔn sɛ wɔnkɔbɔ no asɛndua mu.+ 16 Na asraafo no de no fii hɔ kɔɔ adiwo hɔ, kyerɛ sɛ, amrado no fi hɔ; na wɔfrɛfrɛɛ asraafodɔm no nyinaa behyiae.+ 17 Na wɔhyɛɛ no ataade afasebiri, na wɔde nsɔe nwenee ahenkyɛw* de hyɛɛ no; 18 na wofii ase kyiaa no sɛ: “Asomdwoe nka wo, Yudafo Hene!”*+ 19 Afei nso, wɔde demmire* hwehwee ne tirim tetew ntasu guu no so, na wobuu nkotodwe kotow no. 20 Bere a wodii ne ho agoru wiei no, woyii ataade afasebiri no fii ne ho de n’ataade nguguso no hyɛɛ no. Na wɔde no kɔe sɛ wɔrekɔbɔ no asɛndua mu.+ 21 Bio nso, wɔhyɛɛ obi a ɔretwam, Kireneni Simon, Aleksandro ne Rufo papa, a ɔnam kwan so reba kurom hɔ sɛ ɔnsoa Yesu asɛndua* no.+ 22 Enti wɔde no baa baabi a wɔfrɛ hɔ Golgota, a sɛ wɔkyerɛ ase a, ɛkyerɛ “Tikora.”+ 23 Ɛha na wɔyɛe sɛ wɔbɛma no nsã* a wɔde kurobow* afra,+ nanso wannom. 24 Na wɔbɔɔ no asɛndua mu, na wɔbɔɔ ntonto kyɛɛ n’ataade nguguso mu huu nea ɛsɛ sɛ obiara fa.+ 25 Saa bere yi, na ɛyɛ dɔn a ɛto so abiɛsa;* saa bere no na wɔbɔɔ no asɛndua mu. 26 Na wɔkyerɛw nea enti a wɔretwe n’aso no sɛ: “Yudafo Hene No.”+ 27 Bio nso, wɔbɔɔ akorɔmfo werɛmfo baanu bi asɛndua mu kaa ne ho, baako wɔ ne nifa, ɛnna baako wɔ ne benkum.+ 28 *—— 29 Na wɔn a wɔretwam no kasa tiaa no. Wɔwosow wɔn ti,+ na wɔkae sɛ: “Ɔtwea! Ɛnyɛ wo na wokae sɛ wubedwiriw asɔrefi no agu na wode nnansa asi no?+ 30 Si fi asɛndua* no so, na gye wo ho.” 31 Asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no nso dii ne ho agoru saa ara. Wɔkae sɛ: “Ogyee nkurɔfo, nanso ontumi nnye ne ho!+ 32 Afei ma Kristo no, Israel Hene no, nsi mfi asɛndua* no so na yenhu na yennye no nni.”+ Wɔn a wɔbɔɔ wɔn asɛndua* mu kaa ne ho no mpo yeyaw no+ saa ara. 33 Bere a eduu dɔn a ɛto so asia* no, esum baa asaase no nyinaa so kosii dɔn a ɛto so akron.*+ 34 Na dɔn a ɛto so akron* no, Yesu de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Eli, Eli, lama sabaktani?” Asekyerɛ ne sɛ: “Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me?”+ 35 Na bere a wɔn a wogyinagyina hɔ no tee no, ebinom fii ase kae sɛ: “Hwɛ! Ɔrefrɛ Elia.” 36 Ɛnna obi tuu mmirika de sapɔw* kɔbɔɔ nsã* a emu kaw mu de tuaa demmire* ano, na ɔde kɔmaa no sɛ ɔnnom,+ na ɔkae sɛ: “Munnyaa no! Momma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abeyi no asi fam anaa.” 37 Na Yesu teɛɛm denneennen, na owui.*+ 38 Na ntwamutam a ɛwɔ kronkronbea+ hɔ no mu tew abien fi soro besii fam.+ 39 Saa bere no, na ɔsraani panyin no gyina hɔ a n’ani tua Yesu. Bere a ohuu nsɛm a esisii, na afei ohui sɛ Yesu awu no, ɔkae sɛ: “Ampa ara, onipa yi yɛ Onyankopɔn Ba.”+ 40 Ná mmea bi nso gyinagyina akyirikyiri rehwɛ. Wɔn mu bi ne Maria Magdalene, ne Yakobo Kumaa ne Yose maame Maria, ne Salome+ 41 a na wɔtaa ne Yesu nantew som no+ bere a na ɔwɔ Galilea no, ɛne mmea foforo pii a wɔkaa ne ho kɔɔ Yerusalem no. 42 Ná adu anwummere, na esiane sɛ na ɛyɛ Ahoboaboa Da, kyerɛ sɛ, ɛda a edi Homeda anim nti, 43 Yosef a ofi Arimatea, Bagua* no muni a nkurɔfo bu no paa,* a na ɔno nso retwɛn Onyankopɔn Ahenni no bae. Ɔde akokoduru kɔɔ Pilato anim kɔsrɛe sɛ ɔmfa Yesu amu no mma no.+ 44 Ná Pilato ntumi nhu sɛ Yesu awu anaa, enti ɔfrɛɛ ɔsraani panyin no, na obisaa no sɛ Yesu awu anaa. 45 Bere a ɔte fii ɔsraani panyin no hɔ sɛ Yesu awu no, ɔde amu no maa Yosef. 46 Ɛnna Yosef tɔɔ nwera pa, na oyii no too hɔ de nwera pa no kyekyeree no, na ɔde no kɔtoo ɔda+ a watwa ato ɔbotan mu no mu; na opiaa ɔbo de twerii ɔda no ano.+ 47 Na Maria Magdalene ne Yose maame Maria kɔɔ so hwɛɛ faako a wɔde no ato no.+
^ Anaa “Fa no sɛn dua so kum no!”
^ Anaa “abotiri.”
^ Anaa “Yudafo Hene, mo!”
^ Ɛyɛ afifide bi a ɛwɔ nsu ho.
^ Kyerɛ sɛ, bɛyɛ anɔpa nnɔn 9.
^ Kyerɛ sɛ, bɛyɛ awia 12.
^ Kyerɛ sɛ, bɛyɛ awia nnɔn 3.
^ Ɛyɛ sapɔw bi a etumi nonom nsu.
^ Anaa “oguu ahome a etwa to.”
^ Anaa “Sanhedrin.
^ Anaa “Bagua no muni a ɔyɛ onuonyamfo.”